🥇CFD Trading: What isaCFD? Beginner Guide to PROFIT July 2022
CFD ကုန်သွယ်မှု- CFD ဆိုတာ ဘာလဲ၊ 2022 မှာ CFD ကုန်သွယ်မှုကို ဘယ်လိုစရမလဲ။
အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်တွင် CFD အရောင်းအဝယ်သည်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းမခံရသည့်အတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးပုံရသည်။ ဤအချက်၏အဓိကအချက်အခြာပေါင် (multi-trillion) CFD နေရာရှိသည်။
၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံအနေဖြင့် CFD များသည်သင့်အားအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဲဒီအစား, သငျသညျရိုးရိုးပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အနာဂတ်စျေးနှုန်းအပေါ်ခန့်မှန်းနေကြသည်။
CFD ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှာဖွေခြင်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်မှန်းချက်တွေမှာဘာတွေထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရတာလဲ။ ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောဖတ်ရန်သေချာပါစေ CFD ကုန်သွယ်ရေးလမ်းညွှန်။ ၎င်းအတွင်း၌ CFD မ်ား၊ ၎င်းတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ သင့်အားကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အရာများနှင့်အခြားအရာများကိုထည့်သွင်းဖော်ပြသည်။
မှတ်ချက် - CFD များသည်အလွန်မှန်းဆနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ သင်ကုန်သွယ်ခြင်းမပြုမီနောက်ခံအန္တရာယ်များကိုသင်ကောင်းစွာနားလည်ကြောင်းသေချာပါစေ။
အရောင်းအဝယ် CFDs ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကဘာလဲ
CFD အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်နည်းပါးသည်
စျေးကွက်များသည် ၂၄/၇ ဖြစ်သည်
CFD ဆိုတာဘာလဲ။ ရိုးရှင်းသော CFD အဓိပ္ပါယ်
စာချုပ်များအတွက်ကွဲပြားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ် CFD တစ်ခုသည်သင်ပိုင်ဆိုင်ရန်မလိုအပ်ဘဲပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအုပ်စုတစ်ခုကိုသင်ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ဘဏ္instrumentာရေးဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒီအစား, သင်ရုံပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းတက်သို့မဟုတ်ကျလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ရှိမရှိအပေါ်ခန့်မှန်းနေကြသည်။ CFD များသည်အလွန်အသုံးဝင်သောကုန်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အနည်းဆုံးတော့၎င်းတို့သည်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားကိုမဆိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ချင်သည် ဆိုကြပါစို့ ရှေ. သမားရိုးကျသဘောအရ၊ အမြတ်အစွန်းရရှိခြင်းဟူသောအမြင်ဖြင့် ရွှေကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝယ်ယူသိမ်းဆည်းသိမ်းဆည်းခြင်းသည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော အခြားခက်ခဲသော ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်လည်း အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ ဆီ နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့. ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့် CFD space သည် အကျုံးဝင်သည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ။
စတော့ရှယ်ယာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ETFs၊ အနာဂတ်များ၊ ရွေးချယ်မှုများ၊ cryptocurrencies၊ စွမ်းအင်များ၊ အတိုးနှုန်းများ သို့မဟုတ် ညွှန်းကိန်း - CFD ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်ပြောသည့် အရင်းခံပိုင်ဆိုင်မှုကို မပိုင်ဆိုင်သော်လည်း CFD များသည် သင့်အား ပိုင်ဆိုင်မှုကို တူညီသောနည်းဖြင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် ခွင့်ပြုပါသည်။
ဥပမာသင် S&P 500 ကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တယ်ဆိုပါစို့။ သူတို့သတိမထားမိသောသူများအတွက် S&P 500 သည် NYSE နှင့် NASDAQ တွင်ဖော်ပြထားသောအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီ ၅၀၀ ကိုခြေရာခံသည့်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်ညွှန်းကိန်းဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းအစုရှယ်ယာ ၅၀၀ ၀ ယ်ရန်လိုအပ်မည့်အစား CFD တစ်ခုတည်းသင်ဝယ်နိုင်သည်။ စျေးကွက်မည်သည့်လမ်းအပေါ်တွင် မူတည်၍ S&P 500 ၏စျေးနှုန်းရွေ့လျားသွားသည်နှင့်အမျှသင်အမြတ်သို့မဟုတ်အရှုံးပေါ်လိမ့်မည်။
ဘယ်လို CFDs အလုပ်လုပ်သလဲ?
CFDs သည်သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိလျှင်ကုန်သွယ်ရန်လွယ်ကူသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ CFD များသည်အခြားကုန်သွယ်မှုတူရိယာများကဲ့သို့အဓိကအားဖြင့်လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သင်ရွေးချယ်လိုက်သောပိုင်ဆိုင်မှုသည်စျေးကွက်ထဲသို့မည်သည့်လမ်းကြောင်းပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်ဟုသင်ဆုံးဖြတ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်နှင့်သင်၏ထွက်ပေါက်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
CFD အရောင်းအဝယ်ဥပမာ 1: HSBC ရှယ်ယာအပေါ်ရှည်လျားသောသွား
သင် HSBC ရှယ်ယာများ၏စျေးနှုန်းတစ်ခုကြောင့်ကြောင့်ယုံကြည်သည်ဆိုပါစို့ တိုးမြှင့်လာသည် ရေတို၌တည်၏။ သင်တိုတောင်းသောကုန်သွယ်မှုကိုသာပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်နှင့်အမျှအစုရှယ်ယာများကိုရိုးရာအဓိပ္ပာယ်ဖြင့် ၀ ယ်ယူခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုကိုမမြင်သာစေနိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့အခကြေးငွေတွေရနိုင်တယ်။ အဲဒီအစား, သင်က CFD ၏ပုံစံ HSBC ရှယ်ယာဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်။
ရှယ်ယာတစ်စုလျှင်ပေါင် ၅ ပေါင်ဖြင့် HSBC တွင် ၁၀ x CFD များကိုသင်ဝယ်ယူသည်
သင်၏စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏသည်ပေါင် ၅၀ (၁၀ x ပေါင် ၅) ဖြစ်သည်
ထိုနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် HSBC ၏စျေးနှုန်းသည်ရှယ်ယာတစ်ဒေါ်လာလျှင် ၆ ပေါင်အထိရှိသည်
သင်သည်သင်၏ CFDs ရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်, သင်ကခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည်
သင် CFDs ကိုသင်£ပေးပြီး (£ 1 - £ 6) ထက်ပိုပေါင် ၁ ပေါင်နဲ့ရောင်းလိုက်တာနဲ့စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေပေါင် ၁၀ (မင်းမှာရှယ်ယာ ၁၀ ခုရှိခဲ့တယ်)
အရေးကြီးသည်မှာသင်သည်အစုရှယ်ယာများကိုအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲ HSBC ၏အနာဂတ်စျေးနှုန်းကိုသင်အမြတ်အစွန်းရရှိခဲ့သည်။ CFD အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းမှာသင်ရိုးရှင်းစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။
CFD အရောင်းအဝယ်ဥပမာ 2: ရေနံအပေါ်တိုတောင်း
ဒီဥပမာမှာရေနံကိုတိုအောင်လုပ်ဖို့သင်ဆုံးဖြတ်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စျေးနှုန်းကိုသင်ယုံကြည်သည်ဟုဆိုလိုသည် ဆီ ဆင်းလိမ့်မည် Shorting သည် CFDs များအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်စျေးကွက်ကျဆင်းနေသည့်တိုင်သင့်အားအမြတ်အစွန်းရစေခြင်းဖြစ်သည်။ တိုတောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းသည်များသောအားဖြင့်အထက်ပါဥပမာနှင့်အတူတူပင်အလုပ်လုပ်သည်။
သငျသညျ 20x CFDs ဆီတစ်စည်လျှင် $ 70 မှာရောင်းချ
ဆိုလိုသည်မှာသင်၏စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏသည်ဒေါ်လာ ၁၄၀၀ (၂၀ x ဒေါ်လာ ၇၀) ဖြစ်သည်။
ထိုနေ့နှောင်းပိုင်းတွင်ဆော်ဒီအာရေဗျထုတ်လုပ်မှုပိုလျှံမှုကြောင့်ရေနံစိမ်းတစ်စည်လျှင်ဒေါ်လာ ၆၀ ကျဆင်းခဲ့သည်
ထို့ကြောင့်သင်သည်တစ်စည်လျှင် ၁၀ ဒေါ်လာအမြတ်ရရှိသည်
မင်းမှာ 20 x CFD တွေရှိတယ်၊ ဒါကအမြတ်အစွန်းအတွက်ဒေါ်လာ ၂၀၀
သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုသိရှိနိုင်ရန် CFDs များကိုသင်ပြန်လည်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊
အထက်ပါဥပမာမှသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း CFD နေရာတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်ရှည်လျားလွန်းသကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။
မည်သည့် CFD စျေးကွက်များကိုကျွန်ုပ်ရောင်းဝယ်နိုင်သနည်း။
အတိုချုပ်ပြောရရင်ရိုးရာဘဏ္marketsာရေးဈေးကွက်ထဲမှာပစ္စည်းတခုကိုသင်ရောင်းဝယ်မယ်ဆိုရင် CFD တစ်ခုရှိတာသေချာတယ်။ ဤအချက်၏အဓိကအကျဆုံးအကြောင်းရင်းမှာ CFD များသည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာစျေးနှုန်းကိုခြေရာခံရုံသာဖြစ်သည်။ ဥပမာကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်ရွှေစျေးနှုန်း ၃ ရာခိုင်နှုန်းတက်သွားပါက CFD ရွှေ ၃ ရာခိုင်နှုန်းတက်လာလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါလူကြိုက်အများဆုံး CFD ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
CFD အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်သင်အွန်လိုင်းပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ CFD ပွဲစားကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်တွင်နောက်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သော်လည်းသင်သတိထားရမည့်ကုန်သွယ်ရေးအခကြေးငွေကိုလေ့လာရန်အရေးကြီးသည်။
CFD ပွဲစားများသည်ပထမနှင့်အဓိကအားဖြင့်ငွေရှာခြင်းလုပ်ငန်း၌ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် CFD ကိုသင်ဝယ်ယူတိုင်းကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကိုပေးဆောင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်ပြုလုပ်ပါကသင်ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ကောက်ခံနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့သင် CFDs ပေါင် ၁၀၀၀ ၀ ယ်ပြီးပွဲစားတစ်ယောက်က ၁% ကောက်ခံသည်ဆိုပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကော်မရှင်ကို ၁၀ ဒေါ်လာပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏ CFD များကိုရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါတွင်လည်းကော်မရှင်တစ်ခုပေးရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်သည်သူတို့သည်ပေါင် ၁၅၀၀ တန်ဖိုးရှိသည့်အခါ CFD ကိုအတူတူရောင်းပါကသင်သည်ကော်မရှင်တွင်£ 1,000 ကိုပေးလိမ့်မည်။
လေ့လာသူကုန်သည်များမကြာခဏလျစ်လျူရှု ပျံ့နှံ့ အထူးသဖြင့်အခကြေးငွေမပေးဘဲကုန်သွယ်မှုပြုရန်တောင်းဆိုသည့်ပွဲစားကိုအသုံးပြုသောအခါ။ သို့သော်၊ ပြန့်ပွားခြင်းသည်သင်သွယ်ဝိုက်ပေးဆောင်မည့်ကုန်သွယ်ရေးအခကြေးငွေဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံအရပြန့်ပွားခြင်းသည်“ ၀ ယ်ခြင်း” စျေးနှုန်းနှင့်“ ရောင်း” စျေးနှုန်းတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ပြောရရင်မင်းကသဘာဝဓာတ်ငွေ့ရောင်းဝယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောပါရစေ။ ၀ ယ်ဈေးက ၅၁ ဒေါ်လာ၊ ရောင်းဈေးက ၅၀ ဖြစ်လျှင်၊ ၂% ပြန့်နှံ့နေသည်ကိုပြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုအနည်းဆုံး ၂% ဖြင့်ကြည့်။ ပင်ချိုးဖျက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်အလွန်တင်းကျပ်စွာပျံ့နှံ့စေသည့် CFD ပွဲစားကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။
CFDs ကိုသြဇာသက်ရောက်ဖို့သင်စီစဉ်မယ်ဆိုရင်ညဥ့်နက်တဲ့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင် CFD ကိုသြဇာသက်ရောက်တာနဲ့ ၀ ယ်တဲ့အခါရောင်းတဲ့အခါမှာပွဲစားတစ်ယောက်ဆီကရန်ပုံငွေများကိုထိထိရောက်ရောက်ချေးယူသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပွဲစားကမင်းရဲ့အကောင့်ထဲမှာရှိတာထက်ပိုက်ဆံပိုရောင်းဝယ်ဖို့ခွင့်ပြုလို့ပဲ။
ထို့ကြောင့် CFDs အပေါ်တစ်ညချင်းငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းသည်ချေးငွေနှင့်အတူတူပင်အလုပ်လုပ်သည်။ သင်အနေအထားကို (၂၄) နာရီကျော်ကြာအောင်ဖွင့်ထားသမျှကာလပတ်လုံးအတိုးပေးမည်။ သြဇာသက်ရောက်ခြင်းသည် CFD စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သောကြောင့်၎င်းသည်နောက်အခန်းတွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှင်းပြပါမည်။
စွန့်စားမှုများပိုမိုများပြားလာသောသင့်အတွက်သူများအတွက်မူသြဇာသည်သင်၏ပွဲစားစာရင်းတွင်သင်ရရှိနိုင်သောအရာများထက်ကုန်သွယ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ယုံကြည်မှုရှိပါကသင်၏အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏သြဇာကိုဆုံးရှုံးနိုင်စေရန်အလားအလာရှိသောကုန်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်သြဇာကိုအသုံးပြုသောအခါသင်မည်မျှလျှောက်ထားလိုကြောင်းဆုံးဖြတ်ရမည်။ ၎င်းကိုအချက်နှစ်ချက်အဖြစ်ဖော်ပြသည် - ၂: ၁၊ ၅: ၁ သို့မဟုတ် ၂၀: ၁ ။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးမည်မျှရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင်၏“ margin” ကိုအချက်နှင့်မြှောက်ရန်လိုအပ်သည်။
CFDs ကုန်သွယ်သည့်အခါ Leverage အသုံးပြုခြင်း၏ဥပမာ
လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်း (LSE) တွင်စာရင်းသွင်းထားသည့်အကြီးဆုံးသောကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ကိုကိုယ်စားပြုသည့် FTSE 100 ကိုသင်ရောင်းလိုသည်ဆိုပါစို့။ Brexit ဆန္ဒခံယူပွဲရလဒ်ကြေငြာပြီးနောက် FTSE 100 သည်အဓိကထိခိုက်ခဲ့သည်။
ဒီအချက်ကစျေးကွက်အပေါ်အလွန်အမင်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ FTSE 100 ပြန်လည်သက်သာလာလိမ့်မယ်လို့သင်ထင်ခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့် FTSE ကို CFD ပုံစံဖြင့်ရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သင်သည်ကုန်သွယ်မှုအပေါ်အလွန်ယုံကြည်မှုရှိခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့် ၁၀း၁ တွင်သြဇာသက်ရောက်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
သင်၏ CFD ပွဲစားအကောင့်တွင်£ 1,000 ရှိသည်
၁၀: ၁ တွင် FTSE 100 ၌သင်သြဇာသက်ရောက်သည်
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် FTSE 10,000 ပေါ်တွင်£ 100 ရောင်းသည်
နောက်တစ်နေ့တွင် FTSE 100 ဈေးနှုန်းသည် ၅ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာသည်
ပုံမှန်အားဖြင့်သင်၏ပေါင် ၁၀၀၀ ကုန်သွယ်မှုသည်အမြတ်အစွန်းပေါင် ၅၀ (ပေါင် ၁၀၀၀ x ၅%) အထိရနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်သင်ကသြဇာသက်ရောက်မှု ၁၀: ၁ ကိုအသုံးချလိုက်တာနဲ့အမြတ်အစွန်းဟာပေါင် ၅၀၀ (ပေါင် ၅၀ x ၁၀) ရှိတယ်။
အပေါ်ကဥပမာမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း CFD ကုန်သွယ်ရေးကမင်းရဲ့မျက်နှာသာရတဲ့အခါမင်းရဲ့အမြတ်အစွန်းကိုအဝေးကနေတိုးလို့ရတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်၏အတွေ့အကြုံအဆင့်မည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ အမြဲ သွားလော့။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, ဝါရင့်ကုန်သည်များအမြဲတမ်းဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အရေးကြီးသည်မှာ FTSE 100 သည် ၅% လျော့နည်းသွားပါကသင်ရရှိလိမ့်မည် ပျောက်ဆုံး £ 500 ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မှန်ကန်သော stop-loss များကိုတပ်ဆင်ရန်ပျက်ကွက်သည့်အခြေအနေတွင်ဖြစ်သည်။ စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အန္တရာယ်လျှော့ချရေးနည်းဗျူဟာများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
ကျွန်ုပ်၏ CFD အရောင်းအ ၀ ယ်များအတွက်မည်မျှသြဇာရှိနိုင်ပါသလဲ။
အထက်ပါကဏ္inတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသြဇာကုန်သွယ်မှုသည်အန္တရာယ်များစွာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ CFD ကုန်သွယ်မှုသည်သင့်ကိုဆန့်ကျင်လျှင်ငွေအမြောက်အများဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ CFD အရောင်းအဝယ်များတွင်မည်မျှသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုသင်ကန့်သတ်ထားလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်ဗြိတိန်သည်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဥရောပ Securities and Markets Authority (ESMA) မှချမှတ်ထားသောသြဇာအကန့်အသတ်ကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အဓိက Forex အားလုံးအတွက် 30: 1
20: 1 မဟုတ်သော Forex အတွဲများအတွက်၊ ရှေနှင့်အဓိကညွှန်းကိန်း
10:1 အတွက် ကုန်စည် ရွှေနှင့် အဓိကမဟုတ်သော အစုရှယ်ယာညွှန်းကိန်းများမှလွဲ၍ အခြား၊
တစ် ဦး ချင်းစီထိတ်များအတွက် 5: 1
cryptocurrencies များအတွက် 2: 1
သို့သော်အထက်ဖော်ပြပါကန့်သတ်ချက်များသည်လက်လီကုန်သည်တစ် ဦး ၏လက်အောက်တွင်ရှိသူများအတွက်သာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းပွဲစား၏အတည်ပြုချက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လျှင်၊ ESMA ၏ကန့်သတ်ချက်များသည်အသုံးမပြုတော့ပါ။ အချို့ကိစ္စများတွင်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သြဇာအဆင့် ၅၀၀: ၁ အထိအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အခြား online sceneရိယာများကဲ့သို့ပင် CFD အရောင်းအဝယ်၏အန္တရာယ်များကိုသင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကုန်သွယ်မှုတစ်ခုမပြန့်နှံ့ပါကသင်ငွေဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့် CFD ကုန်သွယ်မှုနှင့်သင်၏အလုံးစုံထိတွေ့မှုကိုလျှော့ချရန်သင်အသုံးချနိုင်သောကိရိယာများစွာရှိသည်။ ဒီ၏ရှေ့တန်းမှမှာ Stop-loss အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏ငွေအမြောက်အမြားကိုဆုံးရှုံးရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုလျှော့ချမည့်အရေးအကြီးဆုံးကိရိယာမှာ stop-loss order ။ ၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံတွင် Stop-loss order သည်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောအခါတွင်ကုန်သွယ်မှုမှအလိုအလျောက်ထွက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ဟာရွှေကိုတိုနေရင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဈေးနှုန်းသိသိသာသာမြင့်တက်နေတယ်ဆိုရင်သင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ငွေပမာဏကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်လျှော့ချနိုင်သည်။
ဤတွင်ဥပမာ - stop-loss အော်ဒါများသည်လက်တွေ့တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ဟူသောဥပမာဖြစ်သည်။
သင်တိုတောင်းသောကာလတိုအတွက်စျေးနှုန်းတိုးမြှင့်လိမ့်မည်ဟုထင်ဆိုလိုတာက Bitcoin အပေါ်ရှည်လျားသောသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်,
သင် $ 10,000 မှာ Bitcoin CFD ကိုဝယ်ကြလော့
သင်၏ကုန်သွယ်မှုမပြုမီ, သင်သည်လည်း Stop-loss အမိန့်ကို install လုပ်
သင်၏ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ ၁၀% ကျော်ကိုသင်မဆုံးရှုံးလိုသောကြောင့် stop-loss order ကို $ 10 ဖြင့်ထားခဲ့သည်
သင်၏ Bitcoin ကုန်သွယ်မှုသည်သင့်အားဆန့်ကျင်။ စျေးနှုန်းမှာမူကျဆင်းနေသည်။ ထိုနေ့၏အဆုံးအားဖြင့်, Bitcoin 20% ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးယခုအခါ $ 8,000 တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။
သို့သျောလညျး, သငျသညျ $ 9,000 မှာကုန်သွယ်ရေးအလိုအလျောက်ထွက်နိုင် - သင်တပ်ဆင်ထားသည့် stop-loss အမိန့်အတိုင်း။
Stop-loss အော်ဒါများသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအရှုံးနှင့်သင်၏စုစုပေါင်းထိတွေ့မှုကိုလျှော့ချရန်အလွန်ထိရောက်သော်လည်း၎င်းတို့သည် ၁၀၀% အရူးဖြစ်မှုမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်တွင်, မြင့်မားသောမတည်ငြိမ်မှုကာလ၌, stop-loss ကိုအမိန့်ကွပ်မျက်ခံရရလိမ့်မယ်။ အကြောင်းမှာပွဲစားသည်သင်၏အမှာစာကိုစင်မြင့်ပေါ်ရှိအခြားဝယ်သူနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်သင်၏ stop-loss order သည်သင့်အားအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော်သတင်းကောင်းမှာအွန်လိုင်းအာကာသတွင်လှုပ်ရှားနေသော CFD ပွဲစားများသည် 'အာမခံချက် - ဆုံးရှုံးမှုအမိန့်' ဟုခေါ်ဝေါ်သောအရာဖြစ်သည်။ နာမည်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်းပွဲစားသည် ၀ ယ်သူတစ် ဦး ကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ဤအာမခံချက်များအတွက်အပြန်အလှန်အားဖြင့်သင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပြန့်နှံ့မှုပုံစံဖြစ်သောများသောအားဖြင့်ကုန်သွယ်ခကိုပိုပေးရလိမ့်မည်။
CFD ဆိုတာဘာလဲ၊ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ သင်စဉ်းစားရမည့်အန္တရာယ်များကိုသင်ကောင်းကောင်းနားလည်စေရန် - ပွဲစားရွေးချယ်ရာတွင်သင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည့်အရာများကိုယခုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသွားမည်ဖြစ်သည်။ သတိပြုပါ၊ ပွဲစားနှစ်ယောက်သာအတူတူပါပဲ၊ ဒါကြောင့်သင်ဘာလုပ်ဖို့လိုသည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်လိုသည် သငျသညျ။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့ပွဲစားများသည်အလွန်နိမ့်သောကုန်သွယ်ခွန်များကိုအထူးပြုသော်လည်းအခြားသူများကမူသူတို့၏ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်း၏ကျယ်ပြန့်မှုကိုအာရုံစိုက်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ CFD ပွဲစားစာရင်းအသစ်မဖွင့်မှီအောက်ပါအချက်များကိုသုံးသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
သင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည့်အရေးကြီးဆုံးမက်ထရစ်သည် CFD ပွဲစားကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားမှုရှိ / မရှိဖြစ်သည်။ သင်ကဗြိတိန်တွင်အခြေစိုက်ပါကပွဲစားကိုငွေကြေးဆိုင်ရာအပြုအမူအာဏာပိုင်မှခွင့်ပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည် (FCA).
အကယ်၍ မဟုတ်ခဲ့ပါကပွဲစားသည်တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ CFD ပွဲစားသည်အခြားတရားစီရင်မှုများတွင်လိုင်စင်ချထားလျှင်သိသာသည်။
သင်၏ CFD ပွဲစားအကောင့်ကို သင်မည်ကဲ့သို့ ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပွဲစားအများစုသည် ဒက်ဘစ် သို့မဟုတ် ခရက်ဒစ်ကတ်အပြင် ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းကို လက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ အချို့ပွဲစားများသည် သင့်အား e-wallet ကဲ့သို့သော e-wallet မှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေများ အပ်နှံခွင့်ပြုသည်။ PayPal က နှင့် Skrill.
ငွေပေးချေမှုစနစ်၏ထိပ်ဆုံးတွင်သင်သည်ငွေသွင်း / ထုတ်ယူချိန်ကိုလည်းကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။
ပွဲစားတစ် ဦး သည်သင့်အတွက်မှန်ကန်မသင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အခကြေးငွေများသည်သင်၏စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသင့်သည်။ ကျနော်တို့ကော်မရှင် - အခမဲ့ကုန်သွယ်ကမ်းလှမ်း CFD ပွဲစားများကြိုက်တတ်တဲ့။ အလားတူစွာကျွန်ုပ်တို့သည်တင်းကျပ်စွာပြန့်ပွားမှုကမ်းလှမ်းသောပွဲစားများကိုလည်းပိုနှစ်သက်သည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်နယ်ပယ်ကိုယ်နှိုက်သို့ရောက်သောအခါ CFD ပွဲစားသည်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်စတော့စျေးကွက်ညွှန်းကိန်းများကိုသင်ရောင်းလိုပါကပွဲစားစာရင်းကိုမည်မျှလဲလှယ်သည်ကိုကြည့်ပါ။
အကောင်းဆုံး CFD ပွဲစားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုကမ်းလှမ်းကြသည်။
သင်သည်သင်၏ CFD ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုနောက်အဆင့်သို့ရောက်ရန်ကြိုးစားနေပါက charting tools များကိုအသုံးပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာများကသင့်အားသမိုင်းဆိုင်ရာစျေးနှုန်းများကိုအဆင့်မြင့်စွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်သင့်အားခွင့်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းတွင်သင့်အားအောင်မြင်သောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုအကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းပေးသည်။
ထို့ကြောင့် CFD ပွဲစားကိုရွေးချယ်ပြီးနည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိရိယာများကိုပုံဖော်ပေးသည်။
သင်ဟာအသစ်စက်စက်ကုန်သည်တစ် ဦး လား၊ သင်၏ခါးပတ်အောက်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသောအတွေ့အကြုံရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်စေ၊ သုတေသနကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ CFD အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်အခြေခံကျသောဆန်းစစ်လေ့လာမှုကိုအားထားလျှင်၎င်းသည်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။
အကောင်းဆုံး CFD ပွဲစားများသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီသတင်းများ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာများနှင့်အလားအလာများကိုပေးသည် ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ တစ် ဦး အထူးသဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာ။
CFD အရောင်းအဝယ်: ငါဘယ်လိုစတင်ရမလဲ။ အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်
ယနေ့ CFD အရောင်းအဝယ်အကောင့်ဖြင့်စတင်ရန်ရှာဖွေနေသည်၊ သို့သော်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသေချာမသိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုစစ်ဆေးပါ။
အဆင့် ၁ - CFD ပွဲစားကိုရွေးချယ်ပါ
CFDs များကိုစတင်အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်အွန်လိုင်းပွဲစားကိုသင်လိုအပ်သည်။ ရာနှင့်ချီသောသတ်မှတ်ထားသော CFD ပွဲစားများသည်ယူကေနေရာတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်နေသဖြင့်ရွေးချယ်မှုများစွာရှိသည်။ ထိုအရာများဖြင့်အထက်ဖော်ပြပါအပိုင်းကို CFD ပွဲစားကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုပါသည်။
သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်ပွဲစားတစ် ဦး ကိုသင်တွေ့ရှိပြီးပါကအဆင့် ၂ သို့ဆက်သွားပါ။
သင်ရွေးချယ်ထားသော CFD ပွဲစားနှင့်အကောင့်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ပထမ ဦး စွာ၊ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့ကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်၏အမည်အပြည့်အစုံ၊ အိမ်လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ နိုင်ငံသားအာမခံနံပါတ်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်တို့ပါဝင်သည်။ သတင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ၊
သင်၏ဘဏ္standingာရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းသင်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်၏အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ၊ နှစ်ပတ်လည်ဝင်ငွေနှင့်သင့်အိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေငှားရမ်းခြင်းတို့ပါ ၀ င်သင့်သည်။
အဆင့် 3: ကြိုတင်ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံ
FCA နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန် UK CFD ပွဲစားများသည်သင်ကုန်သွယ်မှုအန္တရာယ်များကိုသင်ကောင်းစွာနားလည်ရန်သေချာစေရမည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ယခင်ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမေးလိမ့်မည်။ ဥပမာ - သင်ယခင်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ဖူးသောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများနှင့်သင့်ကုန်သွယ်မှု၏ပျမ်းမျှအရွယ်အစား။
အဆင့် ၄: သင်၏သက်သေခံအထောက်အထားကိုစစ်ဆေးပါ (KYC)
ရန်ပုံငွေများကိုသွင်း။ ကုန်သွယ်ခြင်းမပြုမီသင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ ထပ်မံ၍ ပြောရလျှင်ပွဲစားသည် FCA ကိုလိုက်နာရန်နှင့်ဗြိတိန်တွင်ငွေကြေးခ ၀ ါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။
စိတ်မပူပါနဲ့ အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အလွန်လွယ်ကူပြီးအချို့စာရွက်စာတမ်းများကိုတင်ရန်သင်သာလိုအပ်သည်။ ကိစ္စရပ်အများစု၌သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မိတ္တူနှင့်လိပ်စာအထောက်အထား (ဥပမာဘဏ်ငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းငွေတောင်းခံလွှာ) ကိုတင်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏အထောက်အထားကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်။ ထို့နောက်သင်၏ CFD ပွဲစားအကောင့်ကိုရန်ပုံငွေထည့်နိုင်သည်။ ပံ့ပိုးပေးသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများသည်ပွဲစားများမှအကျိုးဆောင်များနှင့်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းတွင်အများအားဖြင့်အနည်းဆုံးဘဏ်ငွေလွှဲပါဝင်သည်။ ခရက်ဒစ်နှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်ကိုလက်ခံနိုင်သည်။ အချို့ကိစ္စရပ်များတွင် CFD ပွဲစားသည် PayPal ကဲ့သို့ e-wallet မှတဆင့်ငွေသွင်းရန်သင့်အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
6 Step: ထရေးဒင်း Start
ဂုဏ်ယူပါတယ် - CFD ပွဲစားစာရင်းကိုသင်အောင်မြင်စွာဖွင့်ပြီး၊ ရလဒ်အနေနှင့်သင်သည်အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ သတိပြုပါ၊ သင် CFD နေရာ၌သင်သာလေ့လာသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကအမှန်တကယ်ပမာဏအနည်းငယ်ဖြင့်စတင်ရောင်း ၀ ယ်ရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။
အချို့ဝေဖန်သုံးသပ်သူများကသရုပ်ပြအကောင့်ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုကြသော်လည်း၎င်းတွင်၎င်း၏အားနည်းချက်များရှိသည်။ အရေးကြီးသည်မှာသရုပ်ပြအကောင့်များသည်သင့်အားငွေဆုံးရှုံးခြင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပြင်ဆင်ရန်မဟုတ်ပါ။ ကုန်သည်များအားလုံးတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည့်အရာဖြစ်သောကြောင့်သင်၏ CFD လုပ်ငန်းခွင်ကိုအသေးစားလောင်းကြေးဖြင့်စတင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
CFD ကုန်သွယ်ရေးလမ်းညွှန်: နိဂုံး
သငျသညျပါတယ် အကယ်. ဖတ် ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်သည်အစမှအဆုံးထိယခုသင်၌ CFD များအကြောင်း၊ သူတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ သင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်အန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ်ခိုင်မာသည့်စိတ်ကူးရှိသင့်သည်။ မှန်ကန်သောအန္တရာယ်လျှော့ချရေးနည်းဗျူဟာများရှိပြီး CFD နယ်ပယ်သည်သင်၏ရေရှည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရည်မှန်းချက်အများစုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ သင်သည်အစုရှယ်ယာများနှင့်ရှယ်ယာများ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ အတိုးနှုန်းများ၊ ETFs များသို့မဟုတ် cryptocurrencies နှင့်ထိတွေ့မှုရရှိရန်ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေ CFD များကသင့်အားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ဝယ်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်။
CFD ပွဲစားများရွေးချယ်ခြင်း၏အရေးကြီးပုံကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်ပေးထားသည်။ ရာနှင့်ချီ။ ရွေးချယ်နိုင်သောပလက်ဖောင်းများဖြင့်သင်၏တစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်ပွဲစားတစ်ယောက်နှင့်အတူသွားရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် PayPal သိုက်များကိုထောက်ပံ့သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အလွန်နိမ့်သောအခကြေးငွေများကိုတောင်းခံသည့် platform တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကောင့်တစ်ခုမဖွင့်ခင် CFD ပွဲစားကိုသေချာဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ပါ။
CFD v အလွှာလောင်းခြင်း - ခြားနားချက်ကဘာလဲ။
တစ်ဖက်တွင် CFD အရောင်းအဝယ်နှင့်ပြန့်ပွားခြင်းလောင်းခြင်းသည်သင်နှင့်တူသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုတွက်ချက်မှုသည် CFD များနှင့်ပြန့်ပွားခြင်းလောင်းခြင်းကွဲပြားသည့်နေရာဖြစ်သည်။
၎င်းသည် CFD ပွဲစားအပေါ်မူတည်သည်။ ယူကေနေရာတွင်တက်ကြွသောပွဲစားများသည်အနည်းဆုံးပေါင် ၁၀၀ ကိုတောင်းကြလိမ့်မည်၊ သို့သော်အခြားသူများကမူပိုမိုတောင်းခံနိုင်သည်။
ယူကေရှိ CFD ပွဲစားများကိုမည်သူထိန်းညှိသနည်း။
ဘဏ္Conာရေးအပြုအမူအာဏာပိုင်သည်ယူကေရှိ CFD ပွဲစားများကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်တာဝန်ယူခြင်းများပြုလုပ်သည်။ ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်, ဗြိတိန် CFD ပွဲစားများ ESMA အားဖြင့်ဖော်ပြထားသော ဦး ထုပ်ကိုလိုက်နာရပေမည်။
CFD ပွဲစားတစ် ဦး မှာဘာရောင်း ၀ ယ်ရမလဲ။
CFD ပွဲစားများသည်များသောအားဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကုန်သွယ်မှုတူရိယာများကိုလက်ခံထားကြသည်။ အစုရှယ်ယာများနှင့်ရှယ်ယာများ၊ ETFs၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ အတိုးနှုန်းများ၊ cryptocurrencies သို့မဟုတ်စွမ်းအင်များကိုသင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည်ဖြစ်စေ CFD သင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
ထောက်ပံ့သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများသည်ပွဲစားများမှအကျိုးဆောင်များနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ဘဏ်ငွေလွှဲ၊ အကြွေး / အကြွေးကဒ်သို့မဟုတ် e-wallet တို့ပါ ၀ င်သည်။
ငါ CFDs ကုန်သွယ်သည့်အခါငါတိုတိုသွားနိုင်သလား?
မင်းလုပ်နိုင်မှာသေချာတယ် စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည် CFDs များ၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်စျေးကွက်ကျဆင်းနေသည့်တိုင်သင့်အားအကျိုးအမြတ်များရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။